वाशि Washington्टन संयुक्त राज्य अमेरिकाका famous सबैभन्दा प्रसिद्ध भवनहरूको घर हो जुन असंख्य चलचित्रहरूमा देखा पर्‍यो। के तपाई उनीहरूलाई जान्न चाहानुहुन्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हनीमून गन्तव्यहरू
अमेरिकामा छ हनीमून गन्तव्यहरू - एक अद्भुत विविधता। सनी फ्लोरिडा देखि हिस्पैनिक क्यालिफोर्निया।
Tierradentro को पुरातात्विक क्षेत्र, Cauca मा
कोलम्बियामा प्रि-कोलम्बियाली सभ्यताको महान खजाना मध्ये एक टियराडेन्टरो राष्ट्रिय पुरातत्व पार्कमा भेटिन्छ।
एरोफ्लटसँग सामानका लागि नयाँ नियमहरू छन्
नयाँ एरोफ्लट ब्यागेज नियमहरूका बारे जान्नुहोस्, तपाईंको उडानहरू बुकिंग गर्ने र तपाईंको यात्राको योजना बनाउँदा महत्त्वपूर्ण जानकारी।
रूसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकहरू
रूसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकहरू, जुन पनि यस देशमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको पर्यटन आकर्षण हो।
किन रोम यात्रा
रोमको यात्रा गर्नु सबै भन्दा राम्रो चीजहरू मध्ये एक हो किनकि यो यूरोपको उत्तम शहरहरू मध्ये एक हो।
न्यूयोर्कमा most सबैभन्दा प्रसिद्ध स्टोरहरू
यदि तपाईं न्यू योर्क जानुभयो भने, तपाईं सायद सोच्नुहुन्छ कि तपाईले आफ्नो खरीदहरूको लागि अतिरिक्त खाली सूटकेस ल्याउनु पर्छ कि भनेर।
भ्याटिकनमा बर्निनीको उपनिवेश युरोपियन बारोकको आश्चर्यकर्म मध्ये एक हो। यो तीर्थयात्रीको स्वागत आलिंगनको प्रतीक हो।
आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरू राइन्ट्स कोजवे, केरी वा डब्लिन आफैमा जस्तै जस्ता ठाउँहरू छन्।
Providencia र सान्ता क्याटालिना बीच प्रेमीहरूको अद्भुत पुल
ब्रिज अफ प्रेमी, जो प्रोविडेन्शिया र सान्ता क्याटालिना टापुहरू जोड्छ, एक जोडीको रूपमा रमाउनको लागि उत्तम ठाउँ हो।
बार्सिलोना को नक्शा शहर को आनंद लिन। आसपासका क्षेत्रहरू, जिल्लाहरू, मेट्रो नक्शा, पर्यटक बस नक्शा, बार्सिलोना बाइक लेनहरू, स्मार्टफोन नक्सा ...
La Candelaria को उत्पत्ति, बोगोटा को ऐतिहासिक पड़ोसी
केहि अन्य स्थानहरू जस्तै मनमोहक, यसको साँघुरो सडक र पुरानो facades शहर को ईतिहास पत्ता लगाउन एक रमाईलो पर्यटक पैदल लिन आमन्त्रित गर्नुहोस्।
दक्षिणी पेरूको शहरहरू
दक्षिणी पेरूमा शहरहरू जस्तै अरक्विपा, टाका वा पूनोले तपाईंलाई एक धनी स्मारक सम्पदा र समृद्ध परिदृश्य प्रदान गर्दछ।
मेडागास्करले तपाईंलाई काल्पनिक परिदृश्य र अद्भुत समुद्री किनारहरू, तर एक स्वादिष्ट ग्यास्ट्रोनोमी र एक आरामदायी अफ्रीकी चरित्र प्रदान गर्दछ।
अस्टुरियसका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू, ओभिडोबाट
हामी तपाईंलाई अस्टुरियसका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू देखाउँदछौं जुन तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं रियासतको राजधानी ओभिडो भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने।
टोकोरोरो, क्युबाको राष्ट्रिय चरा
टोकोरोरो मात्र चरा भन्दा बढी हो: यो क्युबाको राष्ट्रिय चरा हो। यसको मतलव यो देशको राष्ट्रिय प्रतीकको अंश हो।
भियनाका केही विशिष्ट उपहार
त्यहाँ केही विशिष्ट भियना उपहारहरू छन् जुन सबै यात्रुहरूले खरीद गर्न मन पराउँछन्, निस्सन्देह सबैभन्दा लोकप्रिय। यी साथीहरू र परिवारको लागि क्लासिक खरीदहरू छन्।
के तपाईं लान्जारोटको कुवेआ डे लस भर्डेसको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ? आज हामी तपाईंलाई ती सबै जानकारी प्रदान गर्दछौं जुन तपाईंले प्रतिक्षा गरिरहनु भएको थियो। तपाईं हराउन जाँदै हुनुहुन्छ?
हवानालाई किन त्यस्तो भनिन्छ?
हभानालाई किन यस्तै भनिन्छ र यसको मतलब के हो पत्ता लगाउनुहोस्
भेनेजुएला जgle्गलको मुटुमा यस देशको महान् प्राकृतिक खजानाहरूमध्ये एक लुकेको छ र ...
यदि तपाईं एक उत्तम यात्राको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने स्विडेनमा के हेर्न नभुल्नुहोला। किनभने हामी तपाईंलाई धेरै फरक परिदृश्यहरूमा लैजान्छौं तर सबै उत्कृष्ट सुन्दरताबाट।
फ्रेन्च बास्क देश
फ्रान्सेली बास्क देश ईतिहास र स्मारकहरूले भरिएको क्षेत्र हो। तर, सबै भन्दा माथि, अद्भुत परिदृश्य र उत्तम ग्यास्ट्रोनमीको।
थर्मल स्नान बुडापेस्ट
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कुन स्थानको सबैभन्दा प्रसिद्ध र अचम्मको बुडापेस्ट हट स्प्रि ?्ग हो? यहाँ हामी ती स्थानहरू चयन गर्छौं जुन तपाईंले प्रतिक्षा गरिरहनु भएको थियो।
ल्योनमा के हेर्ने
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ लियनमा। त्यसोभए यस यात्रालाई नभुल्नुहोला सब भन्दा सुन्दर र सम्पदा ठाउँहरूमा।
के तपाईं एन्डोर्रामा के हेर्न जान्न चाहानुहुन्छ? त्यसोभए हामीले उल्लेख गरेको मिटिंग पोइन्टहरू नभुल्नुहोस्। वास्तुकला, ईतिहास र दृश्य दृश्यहरू।
Cinque Terre: इटालीको सबैभन्दा र colorful्गीन स्थानमा तपाईंलाई स्वागत छ
रंग, समुद्री वातावरण र चलनले सिन्के टेरेको पाँच शहरहरू बनाएको छ, इटालीको उत्तरी तटमा देखाइएको एउटा स्वर्ग।
सान होसेको ग्रूटोहरू
स्यान होसेका गुफाहरू हाम्रो देशमा भएको उत्कृष्ट प्रदर्शनहरू हुन्। डु boat्गा यात्रा कोठामा रमाईलो गर्दै छन् जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ
त्यहाँ एक दिनमा मिलानमा केही स्थानहरू छन् र हामी ती तपाईंलाई उल्लेख गर्नेछौं। महान सुन्दरताको अनौंठो ठाउँहरू जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न।
बाल्कनहरु: संसारमा सब भन्दा अज्ञात ठाउँ मध्ये एकमा के हेर्ने
राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक शहरहरू वा परिकथा तालहरू। स्लोभेनियादेखि ग्रीस सम्म, त्यहाँ बाल्कन प्रायद्वीपमा धेरै धेरै हेर्न सकिन्छ।
पेरिसको मोन्टपर्नासे टावरमा के हेर्ने र के गर्ने
यदि तपाईं पेरिसमा वैकल्पिक योजनाको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, मोन्टपर्नासे टावरमा जान र प्रेम शहरको उत्तम दृश्यहरू प्राप्त गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
हामीसँग बेनिडर्ममा के गर्ने भन्ने सवालमा राम्रो जवाफहरू छन्। किनभने यो धेरै कोर्नहरूसँग हेर्न ठाउँ र गतिविधिहरू गर्नु हो।
सार्डिनियामा के हेर्ने
जब हामी सार्डिनियामा के हेर्ने बारे सोच्छौं, धेरै अनौंठो र अद्भुत ठाउँहरू दिमागमा आउँछन्। आज हामी ती सबैको समीक्षा गर्दछौं।
प्लिटवाइस ताल: फेरीटेल क्रोएशिया
जादुई झरना, हिमाल र समुद्री जंगल वा काल्पनिक तालहरूले क्रोएशियामा अद्भुत प्लिटवाइस लेक राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउँछ। यो नछुटाउ
यदि तपाइँ रोसियोको गाउँमा के गर्ने र के हेर्ने भनेर सोचिरहनुभएको छ भने, हामीसँग सब भन्दा राम्रो उत्तरहरू छन्। गतिविधिहरू र रमाईलो गर्न ठाउँहरू।
यसको सेतो गाउँको आकर्षणदेखि सियरा डे ग्राजालेमा प्राकृतिक पार्कको स्प्रि .्गसम्म, त्यहाँ सियरा डि काडिजमा धेरै देख्न सकिन्छ।
जेरेज डे ला फ्रन्टेरामा के हेर्ने
हामी जेरेज डे ला फ्रन्टेरामा देख्न सकिने सबै कुरा पत्ता लगाउन आन्दुसियाको सबैभन्दा चम्किला शहरहरू मध्ये एउटामा डुबाउँछौं।
जापानी संस्कृति: cur जिज्ञासाहरू जुन तपाईंलाई थाँहा थिएन
जापानी संस्कृतिका यी cur जिज्ञासुहरू ग्यास्ट्रोनोमी, आध्यात्मिकता वा अद्वितीय र मनमोहक देशको समाज मार्फत नेभिगेट गर्छन्।
पेरिस days दिनमा: के हेर्ने र के गर्ने
एफिल टावरबाट वर्साइलका दरबारहरूमा हामी पेरिसको areas दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरू र आकर्षक मार्गहरूको भ्रमण गर्दछौं।
कुआलालंपुर पेट्रोनास टावर्स: मलेसियाको हाइट्सबाट
कुआलालम्पुरमा पेट्रोनास टावर्स मलेसियाको महान प्रतिमाहरू मध्ये एक मात्र होईन तर संस्कृति र नवीनताबाट समर्थित एशियाई विजय हो।
एक स्पा सत्र देखि आकर्षक शहरहरु मा हराउन को लागी, एक जोडी को रूप मा एक हप्ता को लागी यी योजनाहरु तपाइँ लाई जीत हुनेछ। के तपाईंले ती सबै गर्नुभयो?
पागल किंगको महल: जब जर्मनीले डिस्नेलाई प्रेरित गर्‍यो
किंवदन्ती र रहस्यहरूले भरिएको, जर्मनीमा पागल किंगको महलले डिज्नीको स्लीपिंग ब्यूटी फिल्मको लागि प्रेरणाको रूपमा काम गर्‍यो।
एनी फ्रान्क हाउस एम्स्टर्डमको महान दृश्यहरू मध्ये एक मात्र होइन, तर इतिहासको सबैभन्दा कालो एपिसोडहरूको प्रतिबिम्ब हो।
बर्लिन days दिनमा
बर्लिनमा enjoy दिनमा तपाईंले आनन्द लिन सक्नुहुने सब भन्दा प्रतीकात्मक कुनाहरू नछुटाउनुहोस्। Hour२ घण्टाको भ्रमणमा छिमेकीहरू, स्मारकहरू र अधिक धेरै।
यदि तपाईं नोभेम्बरमा कहाँ यात्रा गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई उत्तम गन्तव्यहरू साथ छोड्छौं जुन तपाईं त्यस महिनामा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। आकर्षणले भरिपूर्ण अद्वितीय कुनाहरू
ब्रायन कैसल वा ड्र्याकुलाको महल रोमानियामा एक अनिवार्य स्टप हो। यसको पछाडि धेरै आकर्षण र किंवदन्तीहरू भएको ठाउँ।
लोफोटेन टापुहरूमा धेरै ठाउँहरू छन्। शहरहरू मात्र होईन जुन हामी प्रत्येक चरणमा भेट्दछौं। तर हामीले गर्न सक्ने गतिविधिहरूको अभ्यासको लागि। उत्तरी बत्तीहरू रमाइलो नगरीकन।
क्याम्देन टाउनको भ्रमण गर्नु आवश्यक भन्दा बढि कुरा हो। एक फरक छिमेक जहाँ संगीत, बजार र अधिक वैकल्पिक विकल्पहरू सँगै आउँदछन्। यो सबै हरेक हप्ता हजारौं पर्यटक आकर्षित गर्दछ। यो कमको लागि होइन!
बार्सिलोना को लागी सबै भन्दा राम्रो गाईड। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र पीडीएफमा हाम्रो पूरा बार्सिलोना गाइड डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसो भए तपाई बार्सिलोना गाइड प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र केहि पनि गुमाउनु र समय बचत नगरी शहर पत्ता लगाउन। सबै स्मारकहरू र स्थानहरू जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं बार्सिलोनाका पर्यटक हुनुहुन्छ, जुन विश्वमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको थियो।
छिमेकीहरू र एल्चेको पुलहरू
आज एल्चेको धेरै छिमेकहरू छन्, नयाँ र पारंपरिक, बढी वा कम ठूला, तर तिनीहरू मध्ये प्रत्येकमा यसको छ ...
भौगोलिक क्षेत्र जुन गुआडालजारा प्रान्तले प्रस्तुत गर्दछ बोट परिदृश्यको हिसाबले धेरै फरक छ, परिणामस्वरूप ...
एल्चेमा आइस स्केटिंग
आइस स्केटि another अर्को आकर्षण हो जुन एल्चे शहरले प्रस्तुत गर्दछ। ट्र्याक मा छ ...
कुएन्कामा जीव र वनस्पति
कुएन्का बोटबिरुवा एक धेरै सुविधाहरू मध्येको हो जुन यस क्षेत्रमा फेला पार्न सकिन्छ, किनकि पछि ...
यदि तपाइँ लन्डनमा के हेर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने, यस गाइडलाई नहटाउनुहोस् १ great अत्यावश्यक भ्रमणको साथ महान आकर्षणको साथ शहरमा। के तपाईं ती सबैलाई चिन्नुहुन्छ?
मुख्य स्थानहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईं रूसको रातो वर्गमा देख्न सक्नुहुनेछ। संग्रहालय, क्याथेड्रल र शपिंग सेन्टरले भरिएको क्षेत्र।
चीनमा टेराकोटा योद्धाको उपस्थिति जनाउने thousand हजार आंकडा पूर्वी विशालका रहस्यहरु मध्ये एक रहेको छ।
यी around रंगीन सीढीहरू संसारभरि शियोल वा स्यान फ्रान्सिस्को जस्ता शहरहरूमा शहरी कलाको सम्भावनाको पुष्टि गर्दछ।
स्विजरल्याण्डको राजधानी बर्नमा के हेर्ने
पौराणिक टावरहरू, सपना बगैंचा र भालुहरूले पनि स्वीजरल्याण्डको राजधानी बर्नको मध्ययुगीन शहर अद्भुत श्रृंगार गरे।
ग्रीन लाइटहाउस, डेनमार्कको पहिलो १००% पारिस्थितिक भवन
डेनमार्कको ग्रीन लाइटहाउस, २०० in मा कोपेनहेगनमा खोलिएको हो, जुन विश्वको दिगो वास्तुकलाको उत्कृष्ट उदाहरण हो।
कोलम्बिया को भौगोलिक क्षेत्र
कोलम्बियाको भौगोलिक क्षेत्रहरू पत्ता लगाउनुहोस्, तपाईंसँग कति जना छन्? हामी तपाईंलाई ती मध्ये एक को विशेषताहरु र खासियत बताउँछौं।
हामी कोलम्बियाको मुख्य टापुहरूको आकर्षण वर्णन गर्दछौं: सान एन्ड्रस, रोजारियो टापु, सान एन्ड्रेस र प्रोविडेन्शिया र अन्य कोलम्बिया टापुहरू।
अष्ट्रेलियामा पर्यटनको पूर्ण आनन्द लिन यी उत्तम ठाउँहरू हुन्। तपाईं महान बाधा चट्टान वा अविश्वसनीय Tasmania याद गर्न सक्नुहुन्न!
यात्रा असीलाह, मोरक्कोको उत्तरी तटमा
असीलाह मोरोक्कोको उत्तरी तटमा रहेको एक सानो शहर हो जसको आरामदायक वातावरण, यसको ओसर र यसको मदिनाको नीलो र सेतो अनुहारका लागि प्रख्यात छ।
एम्स्टर्डम रेड लाइट जिल्ला: बत्तीहरू, र color र शोकेसहरू
एम्स्टर्डमको रेड लाइट डिस्ट्रिक्टले पुरानो पूर्वाग्रहहरूलाई तीन अनौंठो आनन्द जिल्ला, कफी पसल र कला प्रस्ताव गरेर पुनर्जीवित गर्दछ।
कोलम्बिया को कर्डिलरस
हिमाल श्रृंखला के हो? हामी कोलम्बियाको मुख्य पर्वतीय क्षेत्र र यसको महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको समीक्षा गर्दछौं। के तपाईं ती सबैलाई चिन्नुहुन्छ?
एन्जिल फल्स: संसारमा सब भन्दा बढी झरना भेनेजुयलामा छ
कुहिरो र पुरानो दन्त्यकथामा डुबेको, भेनेजुएलाको एन्जेल फल्स, विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलप्रपातको रूपमा अपराजेय छ।
क्यारेबियनमा places ठाउँहरू जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ
क्यारिबियनमा यी places ठाँउहरू जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ केवल समुद्र तटहरू मात्र होइन, तर महान् महल, औपनिवेशिक शहरहरू र काल्पनिक प्राकृतिक पार्कहरू पनि सामेल छन्।
भेनेजुएलाको इतिहास र उपनिवेश
के तपाई भेनेजुएलाको उपनिवेश र इतिहासको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ? यो लेख नछुटाउनुहोस् जहाँ हामी भेनेजुएलाका सबै रहस्यहरू प्रकट गर्दछौं
भारत मा ट्रेन द्वारा यात्रा
भारतमा रेलको माध्यम बाट यात्रा भनेको एक अनुभव हो जसको लागि केही सल्लाह आवश्यक हुन्छ, खुला आँखा तर सबै भन्दा माथि आफैंलाई जान दिनुहोस्।
दुई हप्तामा क्युवामा के हेर्ने
पुरानो हवानाको पौराणिक सडकहरूदेखि त्रिनिडाडका रंगहरूमा, दुई हप्तामा क्युबामा के हेर्ने भनेर जान्नको लागि यी सुझावहरूले ठूलो मद्दत गर्नेछन्।
क्युबा यात्राको लागि २ tips सल्लाहहरू
क्युबा यात्राको लागि यी २ tips सल्लाहहरूले तपाईंलाई क्यारेबियनमा सबैभन्दा सुन्दर टापुहरूमध्ये एक भएको पत्ता लगाउन र रमाईलो गर्न मद्दत गर्दछ।
भारत यात्रा को लागी १ tips सल्लाहहरु
उत्तम यात्रा समयदेखि विशिष्ट अभिवादन सम्म, यी १ tips सल्लाहहरू भारत भ्रमणका लागि तपाईंलाई तपाईंको अनुभव राम्रो योजना बनाउन मद्दत गर्दछ।
सुगन्ध, र or्ग वा ह्याग्लिrak माराकाचेको विदेशी स्यूकहरूमा सँगै आउँदछन् प्रसिद्ध मोरक्कन शहरको कुनै पनि भ्रमणको दौडान।
विश्वका यी १ most र colorful्गीच ठाउँहरूले यात्रा अनुभवलाई सकारात्मकता, संस्कृति र फ्यूजनको इन्द्रेणीमा बदल्छन्।
एस्साउरा: मोरोक्कोको निलो र सेतो शहर
एस्साउरा, मोरक्कोको एट्लान्टिक तटमा, निलो र सेतो स्वर्ग हो जुन इतिहास, संस्कृति, कला र समुद्री समुद्री भरिएको छ।
यदि तपाईं क्यानडाका शहरहरू भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस मार्गनिर्देशनको पालना गर्नुहोस् जब यो देशको सर्वश्रेष्ठ मौसम हो र जुन बर्षको सबैभन्दा चिसो मौसम हो।
कोस्टा रिकाबाट अफ्रो क्यारिबियन खाना
कोस्टा रिकाको विशिष्ट खाना र यसको केही विशिष्ट अफ्रो-क्यारिबियन पकवानहरू जस्तै रोन्डन, गेलो पिन्टो वा क्यासाडो अन्यमा पत्ता लगाउनुहोस्।
संसारमा सब भन्दा सुन्दर सूर्यास्त
संसारका यी सुन्दर सूर्यास्तहरूले हामीलाई यात्रा गर्नु पर्ने र केहि बढी विचारशील बन्नको लागि सम्झाउछ।
ल्याटिन अमेरिकाका यी colorful र colorful्गीन शहरहरूमा पहेलो गिर्जाघर, पेन्टेड घरहरू र साइकेडेलिक पार्टीहरू छन् जुन उर्जा र इतिहासले भरिएका छन्।
विशिष्ट स्विडेनी भाँडा
के तपाईंलाई थाहा छ स्वीडेनमा तपाईले सामन र मीटबलहरू खानुहुन्न? हामी तपाईंलाई यसको ग्यास्ट्रोनोमीको सबै रहस्यहरू देखाउँदछौं, देशको सबैभन्दा विशिष्ट स्वीडिश पकवानहरूको साथ
पोर्तुगालको बारेमा रमाईलो कुरा
यदि तपाईं पोर्तुगाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस सर्फ प्याराडाइजमा तपाईंको छुट्टीको अधिकतम बनाउन हाम्रो मार्गनिर्देशन नभुल्नुहोस्
रेमेडीयो र कायो सान्ता मारिया, क्युबामा संस्कृति र समुद्र तटहरू
यदि तपाइँ त्यो क्युबाको यात्रा गर्न खोजीरहनु भएको छ भने तपाईले पत्ता लगाउनु भएको छैन भने तपाई टापुको उत्तरमा रेमेडीयो र कायो सान्ता मारिया भ्रमण गर्ने अवसर गुमाउन सक्नुहुन्न।
केनिट्रा, मोरक्को र रातीको जीवन
यदि तपाईं केनिट्रा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, मोरक्कोको यो शहरको सम्भावनाहरूको पूर्ण आनन्द लिन हाम्रो सिफारिशहरूलाई नबिर्सनुहोस्
यात्रा गर्दा स्थानीयहरूसँग अन्तर्क्रियाको लागि tips सल्लाहहरू
स्थानीयहरूसँग अन्तर्क्रियाको लागि यी9सुझावहरू जुन तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ तपाईंलाई सबै पक्षहरूमा त्यो नयाँ गन्तव्यमा अनुकूलन गर्न अनुमति दिनेछ।
ओरेगनमा अविश्वसनीय दृश्यहरू
ओरेगन अविश्वसनीय परिदृश्य को एक शानदार विविधता प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि पर्यटकले आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक भ्रमण गर्नुपर्दछ।
8 क्यारिबियन समुद्री किनारहरू तपाईंले अवश्य जानु पर्छ
मेक्सिको, क्यूबा वा अज्ञात बार्बुडा केही टापुहरू हुन् जहाँ यी अर्को next क्यारिबियन तटहरू अवस्थित छन् जुन तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
9 चीजहरू तपाई हवानामा गर्नु पर्छ
स्वादिष्ट मिठाईहरू खाने, मालेकन भ्रमण गर्ने वा गोप्य गल्लीमा हराउने निम्न things वटा चीजहरू हुन् जुन तपाईंले हवानामा गर्नुपर्दछ।
भारतमा ताजमहल भ्रमण गर्दै
ताजमहल, भारतको सबैभन्दा गौरवशाली स्मारक, सम्राट शाहजहाँले उनकी दिवंगत पत्नी मुमताज महलको सम्मानमा १ 1632२ मा निर्माण गरेका थिए।
क्युबामा कसरी इन्टरनेट जडान गर्ने
क्युवामा इन्टरनेट कसरी जडान गर्ने भन्ने कुराले क्यारिबियन टापुको कम जडानलाई ध्यानमा राखी ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ।
क्युवाको यात्राका लागि यी सुझावहरू आवासदेखि न्यानो र सहयोगी क्युबाली स्थानीयहरूसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्ने भन्ने दायरा हुन्छ।
हामी तपाईलाई हल्याण्डको सब भन्दा खास परम्परागत नृत्य संग एक कम्पाइलेसन ल्याउँदछौं, ताकि तपाईका रहस्यहरु र परम्पराहरु तपाईलाई थाहा छ।
ग्रेनाडामा बस्नको लागि उत्तम क्षेत्रहरू
ग्रानडा अन्डालुसियाकै सब भन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक हो र जुन प्रत्येक वर्ष धेरै पर्यटकहरू प्राप्त गर्दछ। यसको सडकहरू अधिक ...
ग्रेट वाल वा ग्रान्ड क्यानियन अर्को १० ठाउँहरू मध्ये दुई हुन् जुन तपाईंले मृत्यु हुनु अघि देख्नु पर्छ।
मोरक्को यात्रा को लागी सल्लाह
मोरक्कोको लागि यात्राका यी सल्लाहहरूमा केहि उपयोगी सिफारिशहरू सामेल छन् जुन तपाईंलाई मघ्रेब देशको जादू र आकर्षणको मजा लिन अनुमति दिनेछ।
के तपाईंलाई थाहा छैन मुख्य अंग्रेजी चलन र परम्परा के हो? हामी तपाईंलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू, :5:०० चियाको इतिहास पढाउँदछौं ...
बोतलको पानी पिउने, एउटा स्थानान्तरण भाँडामा लिन वा आफैलाई जान दिनुहोस् नयाँ गन्तव्यमा पहिलो दिनको लागि निम्न सुझावहरू छन्।
विश्वका सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू ईकोटोरिज्म अभ्यास गर्न
बोर्नियो, अमेजन वा भारतमा इकोटुरिज्म गर्दै यात्रा गर्नु संसारको जैव विविधता र बिभिन्न संस्कृतिहरूलाई सम्मान गर्ने उत्तम तरिका बन्छ।
इ England्ल्यान्ड चार राष्ट्रहरू मध्ये एक हो जुन यूनाइटेड किंगडम, ती मध्ये सब भन्दा ठूलो, र यसको इतिहास बनाउँछ।
भेनेजुएलामा उत्तम पर्यटक आकर्षण: एन्जल फल्स
एन्जेल फल्स वा औयान-टेपुई भेनेजुएलाको यसको सुन्दरता, इतिहास र विश्वमा अद्वितीय अवस्थाका लागि सबैभन्दा रोचक आकर्षणहरू मध्ये एक हो।
रूसमा यात्रा गर्न उत्तम मौसम
हाम्रो टिप्सहरू अनुसरण गर्नुहोस् जब रूसमा यात्रा गर्नको लागि वर्षको सर्वश्रेष्ठ मौसम वा समय हो र तपाईंको यात्राको पूरा आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
क्यारिबियन संस्कृति र यसको इतिहास
यदि तपाई क्यारिबियनको ईतिहास र संस्कृतिका सबै रहस्यहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने क्यारेबियन संस्कृतिका बारे सबै कुरा थाहा पाउन यस पोष्टलाई नहेर्नुहोस्।
भेनेजुएलाको आदिवासी जातीय समूहहरू
भेनेजुएलामा बसोबास गर्ने मुख्य आदिवासी जनजाति समूहहरूको सूची र विवरण, उनीहरूको चलन र संस्कृतिका साथ विस्तृत रूपमा वर्णन गरियो।
Neuschwanstein, सिन्ड्रेलाको महल
के तपाईं सिन्ड्रेला जस्तो राजमहल, न्युश्चवांस्टीन क्यासलको भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ? ठिक छ, यो गाइड अनुसरण गर्नुहोस् जहाँ हामी तपाईंलाई जान्नुहुने सबै कुरा वर्णन गर्दछौं
Cartagena de Indias मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटहरू
कार्टाजेना डे इण्डियास कोलम्बियाई क्यारिबियनमा लोकप्रिय गन्तव्य हो। यस पोस्टमा हामी तपाईंलाई कार्टाजेनामा सबैभन्दा उत्तम समुद्री किनारहरू बताउँछौं।
ग्रीसको वनस्पति र जीवजन्तु पत्ता लगाउनुहोस्, दुई महान ईकोरिजियनहरू जस्तै भूमध्य ज forest्गल र समशीतोष्ण कठोर काठ जंगलले विभाजित गरिएको देश।
प्रकृतिले यसको उपत्यका र पहाडहरूको साथ प्रस्तुत महान विचारहरू, जुन हामी तपाईंलाई स्विजरल्याण्डमा मुख्य दृष्टिकोणबाट प्रस्ताव गर्दछौं।
फिलिपिन्सको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहरहरू
आज हामी फिलिपिन्सको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरू जान्न समर्पित छौं।
ऐतिहासिक क्विजोन शहर
फिलिपिन्सको सबैभन्दा जनसंख्या भएको शहर क्विजोन शहर हो।
यदि तपाइँ कोलम्बियाको यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सबै कोलम्बियाई चलन र जिज्ञासुहरू राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। कोलम्बिया को सबै चलनहरु लाई नबिर्सनुहोस्!
परिवारसँग जानको लागि उत्तम ग्रीक टापुहरू के हुन्
एउटा अविस्मरणीय पारिवारिक बिदाका लागि उत्तम ग्रीक टापुहरू कुन हुन् लेख्नुहोस्!
छोड्न वा ग्रीस मा टिप गर्न को लागी
यदि तपाईं ग्रीसमा छुट्टीमा जानुहुन्छ भने ग्रीसमा टिपिंगको बारेमा तपाईंलाई यी सबै कुरा जान्नुपर्दछ।
के तपाईसँग अष्ट्रेलियामा टिप छ? हो वा होइन? कहिले?
रोम मनोरञ्जन पार्क
हामी तपाईंलाई दुई उत्तम थिम मनोरञ्जन पार्कहरूको भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं यदि तपाईं राजधानीमा तपाईंको बिदा बिताउने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको परिवार वा साथीहरूको साथ।
अमेजन क्षेत्रको सीमा शुल्क र संस्कृति
एमेजोनियन रीतिथिति र संस्कृति को बारे मा सबै विवरण संग कम्पाइलेसन ताकि तपाईं कोलम्बियाई अमेजन को पूरा यात्रा को मजा लिन सक्नुहुन्छ।
हवाना मा समलिays्गी र समलैंगिकहरुका लागि बार
हभानामा यी दुई समलि .्गी र समलि .्गी बारहरूको नाम लेख्नुहोस्
स्विजरल्याण्डको सबैभन्दा प्रभावशाली ताल
स्विजरल्याण्डका सबै प्राकृतिक चमत्कारहरूमा यसको जादुई तालहरू छन्। असंख्य र ठुलो, प्रत्येक एक बढी अविश्वसनीय हो ...
इटालीमा चरम खेल
यदि तपाईं एड्रेनालाईनको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो देश मा उत्तम ठाउँ पाउनुहुनेछ। यसले अभ्यास गर्न असंख्य संभावनाहरू प्रदान गर्दछ ...
रोमको बारेमा जानकारी
इटालीको राजधानी रोम, युरोपको सब भन्दा पुरानो शहर हो र क्याथोलिक धर्मको हृदय हो ...
Syntagma स्क्वायरमा एथेन्समा के हेर्ने
यदि तपाईं एथेन्स जानुहुन्छ भने, Syntagma स्क्वायर वरिपरि हिँड्न र यसको वरपरको कदर गर्न पाँच मिनेट लिन बिर्सनुहोस्,
तीन दिनमा स्विजरल्याण्डको भ्रमण गर्न, तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको जेनेभा शहर जानुहोस्, किनकि ...
अष्ट्रेलियामा केहि उत्तम नग्न समुद्री तटहरू
अष्ट्रेलिया मा सबै भन्दा राम्रो नग्न र topless समुद्री किनार
मिलानको ऐतिहासिक ट्रामहरूमा शहर भ्रमण
मिलानको ऐतिहासिक ट्राम सवारी
अरबी मूलको Vilafamés को महल, पुरानो शहरको माथि अवस्थित छ, तर हामी तपाइँलाई आश्वस्त गर्दछौं कि दृश्यहरू र सजीलो चढाव यसको लागि लायक छ।
फिलिपिन्स ट्रेंच संसारकै सबैभन्दा गहिराइ हो।
सम्भवतः लेमनोस मरुभूमि ग्रीस र युरोपको एकमात्र मरुभूमि हुन सक्छ
क्यारिबियन: ग्रेटर एन्टिलस वा कम एन्टिलिज
क्यारिबियनले विविध पर्यटन प्रस्ताव प्रस्ताव गर्दछ। हाम्रो आदर्श गन्तव्य ग्रेटर एन्टिलिस वा कम एन्टिल्समा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन हामीलाई सामेल हुनुहोस्।
एथेन्स, परम्परा, जीवन को विधि र चलन
स्थानीय बासिन्दाहरूलाई भावनात्मकता र घबराहट जस्ता चरित्र स्वभावबाट छुट्याइएको हुन्छ, यद्यपि जिम्मेवारी को अवस्थाहरूमा उनीहरूले सहिष्णुता देखाउन सक्छन् र कुनै पनि द्वन्द्व सजीलै समाधान गर्न सक्दछन्। संचारको तहमा एथेन्सको आफ्नै संस्कृति छ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन।
लन्डन पहिलो थिएटर हो जहाँ प्रख्यात अंग्रेजी लेखक द शेक्सपियरको ग्लोब थिएटर वा शेक्सपियर थिएटर देखा पर्‍यो।
भेनेजुएला पारम्परिक संगीत
हामी धेरै परम्परागत भेनेजुएला संगीत र सबै भन्दा साधारण भेनेजुएला यन्त्रहरु को रहस्य अन्वेषण। भेनेजुएला को गीतहरु मिस नगर्नुहोस्।
एम्स्टर्डमको हे हुआ बौद्ध मन्दिर
उहाँ हुवा मन्दिर परम्परागत चिनियाँ शैलीको सबैभन्दा ठूलो यूरोपीय बौद्ध मन्दिर हो। यो एम्स्टर्डम को एशियाई क्वार्टर मा स्थित छ।
भेनेजुएलामा आदिवासी जनजाति: Warao
हामी तपाइँलाई Warao को बारेमा बताउँछौं, भेनेजुएलाको आदिवासी जनजाति धेरै विशेषतायुक्त खाना, शिल्प, शिक्षा, यातायात र आवास सहित।
एथेन्स मा सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तट
एथेन्स नजिकका सबै समुद्री तटहरू मेदेखि जुलाई सम्मका महिनाहरूमा धेरै लोकप्रिय छन्।
मनिलाको बारेमा interesting रोचक तथ्यहरू
मनिलाको बारेमा5रोचक तथ्यहरू सम्झन
क्यारिबियनमा स्नातक पार्टी
स्नातक पार्टी एक पटकको जीवनकालमा घटना हो। क्यारेबियनले यो उत्सव मनाउन उत्कृष्ट विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दछ।
सिएरस डे कोर्डोबा: Corralejos नदी झरना वृद्धि
आज हामी Calamuchita मा Corralejos नदी झरना एक पैदल यात्रा शुरू।
अमेरिकाको सर्वश्रेष्ठ डायनासोर संग्रहालय
अर्को हामी मनोरञ्जनको एक विकल्पको रूपमा संयुक्त राज्यमा सबैभन्दा उत्तम डायनासोर संग्रहालयहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं
इ England्ल्याण्डका महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू
यस पटक हामी तपाइँलाई इंग्ल्याण्डको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारकहरूको बारेमा बताउन चाहन्छौं, वेस्टमिन्स्टर अबेबाट सुरू गरेर।
इ England्ल्याण्डमा टेलिफोन बुथहरू यी विभिन्न देशका विशेष सुविधाहरू र तत्त्वहरूमध्येका हुन् जुन यस देशलाई विशेष रूपले अद्वितीय बनाउँछ र विशेष गरी लन्डन शहर।
माइकल एंजेलोका कार्यहरू जुन तपाईं रोममा फेला पार्न सक्नुहुन्छ
भेनिसका पर्यटकहरूसँग समस्या छ
भेनिसका पर्यटकहरूसँग गम्भीर समस्याहरू छन्
स्विजरल्याण्डको भ्रमणको लागि उत्तम समय तपाईको देशमा एक पटक भएको तपाई के गर्न चाहानुहुन्छ त्यसमा धेरै निर्भर हुन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका एक यस्तो देश हो जसले सम्पूर्ण परिवारका लागि ठूलो संख्यामा आकर्षणहरू प्रदान गर्दछ, एक्वैरियमहरू केहि लोकप्रिय आकर्षणहरू हुन्।
लन्डनका दरबारहरूमा रोयल गार्डहरू
रोयल गार्डहरू घरेलु डिभिजनका सबै अंश हुन्, जसले १ Royal1660० देखि रोयल दरबारहरूको रक्षा गरेका छन्
पोम्पीमा गुफा केनम मोजेक
गुफा क्यानेम पोम्पीको भग्नावशेषबाट धेरै प्रख्यात मोजेक छ
माछा र समुद्री खानाको साथ ठेठ डच भाँडा
Haring डच भोजन मा एक मुख्य र सबै भन्दा खास पकवान हो र माथिको र शेलफिश संग के गर्न छ कि अधिक नजिक।
फिलिपिन्सको भूगोल: रोचक तथ्यहरू
फिलिपिन्सको भूगोलको बारेमा चाखलाग्दो तथ्यहरू।
तोडाइजी मन्दिरको प्रबोधन होल
नाराको तोडाइजी मन्दिरको प्रसिद्ध प्वाल छ जसले यसलाई पार गर्न सक्ने जो कोहीलाई पनि ज्ञान दिने वचन दिन्छ। यहाँ हामी तपाईलाई बढी बताउँछौं।
कुनै देशको मान्छेलाई भेट्न स्थानीय बजार भ्रमण जस्तो केहि छैन। तर सबै भन्दा राम्रो इजिप्टबाट स्मारिकाहरू हुन् जुन तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ।
कोस्टा स्मेराल्डा, सार्डिनियाको सर्वश्रेष्ठ
पन्ना कोस्ट सार्डिनियाको सबैभन्दा सुन्दर तट हो
सीक्रेट एनेक्स, एनी फ्रान्क हाउस
प्रिन्सेng्ग्राचट २ 267 मा रहेको सिक्रेट एनेक्स, एम्स्टर्डममा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको घर हो, यो त्यो घर हो जहाँ एनी फ्रान्क बस्ने गर्थिन् र यसमा उनले आफ्नो डायरीको ठूलो अंश लेखिन्।